Mayelana NATHI - Hangzhou Shengbo Trading Co., Ltd.
I-Hangzhou Shengbo Trading Co., Ltd. yasungulwa ngo-2016 futhi inendawo yayo yamanje yebhizinisi e-Hangzhou, e-China. Kunikezelwe ukulawulwa kwekhwalithi eqinile nokusebenza kwamakhasimende okucabangayo, besilokhu sisebenza ngenkuthalo emakethe yasekhaya selokhu kwatholakala inkampani, njengesikhulumi sokuhola esisodwa sokuhola esisodwa esinobudlelwano bebhizinisi obuqondile namakhasimende aseNyakatho Melika, e-Asia, e-Afrika, eYurophu , kanye namazwe aseMpumalanga Ephakathi, ngokunikezela ngezinsizakalo ze-OEM ne-ODM, amakhasimende akwazi ukuhlela imigqa yawo emisha yomkhiqizo ngokushesha futhi kalula ngomkhiqizo wawo, okwamanje, ipulatifomu yokuthenga okukodwa ivumela abathengi ukuthi basebenzise kakhulu izindleko kuzo zombili izikhathi izici zomnotho. Njengenkampani evuthiwe eyenza ibhizinisi emikhiqizweni yezokwelapha neyelebhu engasetshenziswanga, imikhiqizo yethu eyinhloko kubandakanya amathiphu we-robotic / universal pipette, amashubhu okuqoqwa kwegazi, isirinji elahlwayo, ukuqapha umfutho wegazi, ngokugcina ubuhlobo obungahlala njalo nabaphakeli abanedumela elihle abakhiqizi, sisesimweni sokuthatha isinyathelo ngokushesha, siguquguquke futhi sifeze izixazululo ezenziwe ngokwezifiso njengokujwayelekile. I-Hangzhou Shengbo ayenzi ukuyekethisa ekufuneni izixazululo ukwanelisa izidingo zamakhasimende ayo futhi izinikela ezintweni eziyinhloko zefilosofi yenkampani yayo - ukwethembeka, ubuqotho, kanye nokuzibophezela, sihlose ukusungula ubudlelwano bebhizinisi lokuhlomulisana isikhathi eside- term ngesisekelo ikhasimende ngalinye.
Isungulwe ngo-2016, iSunberth igxile ekutholeni nasekuhlinzekeni izinto ezisetshenziswayo zaselebhu zokuhlola izinhlelo zokusebenza. Ngolwazi lwethu lokulawulwa kwekhwalithi kanye nezinhlelo zokuphatha ulwazi olusezingeni eliphezulu, siyakwazi nokuhlinzeka ngezinsizakalo ze-OEM kanye nokuhlinzeka ngamadivayisi wezokwelapha nezinto zokusebenza.
Eminyakeni edlule iSunberth iba esinye sezixazululo ezihola phambili kwezokwelapha, imishini yezokwelapha nezinto ezisetshenziswayo zaselebhu nezinye izinkampani zemikhiqizo ehlobene nezokwelapha ezisezingeni eliphakeme eChina nase-Asia. Ngokuhamba kwesikhathi, sithole ubuchwepheshe bemikhiqizo ebanzi futhi siqoqa izitayela zemakethe ukunikeza izixazululo zokuma ngakunye kuzidingo zamakhasimende. ISunberth ikhombise ukukhula okubonakalayo kuzo zonke izigaba kufaka phakathi imali ekhulayo yonyaka, isabelo semakethe, iphothifoliyo yomkhiqizo, kanye nokumela abalingani bamanye amazwe.
Isimo sobungcweti enhlanganweni yethu, ukusebenza ngokushelela, isimo sezinhlelo zobuchwepheshe bezobuciko, ama-setups, abasebenzi abanolwazi nabanekhono basibeka phambili emkhakheni wethu. Silwela ukugcina sinolwazi ngemikhuba emisha embonini yezokwelapha neyelebhu ukuze sinikeze izinketho ezinhle kakhulu kumakhasimende ethu.
Ngombono ojulile oqhutshwa ukuletha ikhwalithi, uSunberth usebenza ekubambeni, ekunikezeni, ekungeniseni nasekuthumeleni izinto zokwelashwa namadivayisi, imishini yesibhedlela nefenisha nemikhiqizo yaselebhu. Selokhu kwasungulwa inkampani, isisusa sethu sokuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo kumakhasimende aphesheya kwezilwandle ikhula ngokuya ngokuya.
Siyaziqhenya kakhulu ngeqembu esilakhile, uSunberth ubelokhu eyi-ejensi echazwa ngokuhlanganisa abantu abanethalente abanombono owabiwe kanye nentshisekelo yokusisiza ukuba sibe ngabangcono kakhulu kumakhasimende ethu.
Ukwakha, ukuthuthukisa, ukutadisha, ukugcina nokubandakanya ukuzibophezela kwansuku zonke kweqembu lethu. Sisebenza kanzima nsuku zonke ukuqinisekisa ukuthi abantu bethu bayasekelwa futhi banikwe amandla okuletha imiphumela ehlukile kumakhasimende ethu.